aan xad lahayn via qoyska Spotify
Sidoo kale waa mid ka mid ah qaababka ugu fiican haddii la isticmaalayo Spotify u ogolaanaya user si loo hubiyo in music ee aan xad lahayn waxa loo riyaaqay oo ay qoyska oo dhan in arrintan la xiriira. Tutorial ayaa la sameeyey si loo hubiyo in ugu fiican oo gobolka ka mid ah adeegyada farshaxanka aan ku riyaaqay kaliya laakiin user sidoo kale qudha in adeegyada qoyska iyo sidoo kale in la hubiyo in ka-dhimis iyo heerka adeega caymiska waa wax ay bixiso shirkadda. Waa mid ka mid ah qorshaha lagu iibiyo ugu wanaagsan oo saamaxaya kuwa isticmaala in ay ku raaxaystaan ​​heerka ugu sareeya.
Qaybta 1.What waa qoyska Spotify
Qeybta 2: Sida loo helo qoyska Spotify?
Download music Spotify free la TunesGo iyo maqli aan xad lahayn
Qaybta 1. Waa maxay qoyska Spotify?
Waa qorshe ah in la bilaabay in la hubiyo in user helo 50% account caymiska si aad u hubiso in xisaabaadka qoyska iyo mid kasta oo iyaga ka mid ah u dhaqmo sida xisaabta premium heerka dhimis ah. Muuqaaladan dhamaystiran oo qorshaha ayaa sidoo kale lagu xusay website-ka rasmiga ah ee shirkadda si loo hubiyo in user helo adeegyada ugu fiican oo aan wax arrintan iyo dhibaato. Qorshaha Qoyska guud ayaa sidoo kale hubisaa in sifooyinka soo socda la socoto:
1. Premium Xisaabaha dhamaan
Goobaha xisaabaadka caymiska waxaa ku riyaaqay by kasta iyo xubin kasta oo qoyska si ay u hubiyaan in offline music free waxaa dhegaystay oo aan la dhexgelin oo ah wax alla wixii xayeysiis.
2. Arrimaha dhimista
Haa oo waa feature aasaasiga ah iyo ugu weyn ee qoyskaaga oo Spotify sida kasta iyo xisaab kasta oo jecel yahay dhimis gaar ah iyo xisaabta ugu weyn sidoo kale ku riyaaqaya dhimis ah 50% guud ahaan. Xisaabaadka ilmaha arrintan la xiriira sidoo kale ka heli tiro la mid ah oo sicir-dhimis ah si loo hubiyo in hannaanka horumarka.
3. hab gooni ah kala
Xisaab shakhsi marnaba wadaagaan macluumaadka aan ogolaansho loo adeegayaasha iyo sabab la mid ah sidoo kale waa in la ogaadaa in user waa in la hubiyo in ay playlists iyo talooyin kale oo jira gaar ah iyo tijaabin kartaa oo xaqiijiyo mar walba uu doonayo inuu sameeyo.
4. No crabbiness
Si ka duwan adeegyada kale waa ay fududahay in la hubiyo in xisaab-qorshaha qoyska heli 24/7/365 music ah sidii ay u badnaayeen sida koonto gaar ah. User kasta oo kasta oo ka yar qorshaha qoyska hubiyo in music la ciyaaray waqti isku mid ah oo aan la dhexgelin wax ka dhigi kara.
Qaybta 2. Sida loo helo qoyska Spotify?
Geedi socodka ku dhaco qoyska Spotify waa mid fudud dhabta ah iyo waxa la samayn karaa iyada oo sidoo kale soo socda habka uu soo sheegnay hoos ku qoran ama adoo booqda warbaahinta si ay wakiilo adeegyada macaamiisha toosin kara mid user dhamaystiran nidaamka. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in la hubiyo in hannaanka uu soo halkan ku xusan waxaa la socda ka dhigi doonaa sida ma aha oo kaliya ka kaaftoomi lacag la'aan ah, laakiin sidoo kale u ogolaataa dadka isticmaala si aad u hesho sida ugu fiican oo aan xataa u dhaqaaqo inch ah oo aan doonayo in warbaahinta. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa inay hubiyaan in qorshaha la doortay si taxadar leh oo haddii ay jirto arin arrintan la xiriira markaas user heli talo khabiir si arrinta haddii wax loo xalin lahaa sida ugu dhaqsaha badan oo user ka helo Natiijada ugu wanaagsan ee aan ka kaaftoomi kasta.
1. user wuxuu u baahan yahay inuu saxiixo xisaab caymiska by in la hubiyo in macluumaadka dhaqaale waxaa ka diiwaan gashan Spotify siday u baahan yihiin si ay u auto mas'uul xisaabta:
2. account ayaa Spotify yahay markaas in laga heli si loo hubiyo in hannaanka xudunta u dhaliya. Waxa kale oo hubin doona in macaamiisha ay u hesho in ay sidoo kale og bogga account ugu weyn oo ugu danbeyn website-ka:
3. dhankiisii ​​midig sare user ay u baahan tahay si ay u hubiyaan in button casriyayn ee la isku soo riixayo,
4. Bogga xiga user ay u baahan tahay si aad u hubiso in qorshaha qoyska ah waxaa loo doortay in bogga soo socda u muuqata oo aan wax arrintan iyo dhibaatada:
5. user wuxuu u baahan yahay in la hubiyo in qorshaha sida doorashada la doorto oo halkan user ayaa sidoo kale loo baahan yahay in taxaddar sida qorshaha qaldan hal bil buuxda ku kici doona user iyo waa in la ogaadaa in qorshaha qoyska wuxuu noqon karaa oo kaliya bedelay hal mar bishii la soo maray.
Qorshaha qoyska waa xaqiiqo ah mid ka mid ah kuwa ugu fiican si loo hubiyo in wixii kaloo la sameeyo iyada oo aan arin kasta oo user jecel yahay heshiisyo ugu wanaagsan ee ay bixiso shirkadda arrintan la xiriira. Waxaa sidoo kale in la xusay in uu user hubiyo in qorshaha qoyska waxaa la bixiyaa isticmaalka kaarka hadiyadda Spotify sidoo samayn kartaa. Si kastaba ha ahaatee bixinta waqtiga Times aan la bixin karaa iyada oo loo marayo kaarka hadiyadda sida barta in waqti user ay u baahan tahay in ay iska diiwaan credit card ama warsan PayPal si loo hubiyo in lacagta lagu guuleysto oo ka wakiil ah macaamiisha ah.
Sida lagu Helo Spotify Student dhimista
Ma rabtaa inaad badbaadi Your Music la Spotify playlist? Sidaas Easy
Sidee badan oo ka taqaanaa Beta Spotify
Miyaynu heli karaynaa Saaxiibadu Spotify iyo sidee?
Sida lagu Helo Spotify Tayada Sare ee Streaming?
Sidee badan oo Spotify oo daaha ka iyo Access Spotify waddamada Waa LAMA HELI KARO
Ma taqaanaa Siyaabo si aad Spotify Gift Card
Dhoofinta Spotify playlist, kaabta Spotify playlist ama ka soo kabsadaan
> Resource > Spotify > Sida loo Dhegayso Spotify Unlimited via Spotify Qoyska